Faritra Alaotra-Mangoro - Wikipedia
Velarantany 31 948 km2
Isam-ponina 1 112 550 mpo.
Hakitroky ny mponina 34,82 mpo/km2
Laharam-pehintany 17°49′48″ Atsimo
Laharan-jarahasina 48°25′48″ Atsinanana
Ny Faritra Alaotra-Mangoro dia faritra malagasy any andrefana amin' ny faritanin' i Toamasina. Mizara sisintany amin' ny faritra Sofia any avaratra, faritra Analanjirofo any avaratra-atsinanana, faritra Atsinanana any atsinanana, faritra Vakinankaratra any atsimo-andrefana, ary ny faritra Betsiboka any avaratra-andrefana. Ny renivohitr' io faritra io dia Ambatondrazaka, ary ny isan' ny olona miaina any ao amin' io faritra io dia misy 1 112 550 tamin' ny taona 2008. Ny velaran' ny faritra Alaotra-Mangoro dia 31 948 km2.
Dimy ny isan' ny distrika ao amin' ny faritra Alaotra-Mangoro, ary 79 no isan' ny kaominina. Ffaritra mahavoka-bary mamantsy an' i Madagasikara iray manontolo, sopitr' i Madagasikara izy, ao koa ny hazandrano besisika.
Ireto ireo distrika 5 ao amin' ny faritra
Distrikan' Anosibe An'ala
Distrikan' i Moramanga
Distrika sy kaominin'ny Faritra Alaotra-Mangoro
Faritanin'i Toamasina (Madagasikara)
Ambatondrazaka Ambandrika · Ambatondrazaka Ambanivohitra · Ambatondrazaka · Ambatosoratra · Ambohitsilaozana · Amparihitsokatra · Ampitatsimo · Andilanatoby · Andromba · Antanandava · Antsangasanga · Bejofo · Didy · Feramanga Nord · Ilafy · Imerimandroso · Manakambahiny Est · Manakambahiny Ouest · Soalazaina · Tanambao Besakay
Amparafaravola Ambatomainty · Amboavory · Ambohijanahary · Ambohitrarivo · Amparafaravola · Andrebakely Est · Beanana · Bedidy · Morarano Chrome · Ranomainty · Tanambe · Vohimena · Vohitsara
Andilamena Andilamena · Antanimenabaka · Bemaitso · Maintsokely · Maroadabo · Marovato · Miarinarivo · Tanananifololahy
Anosibe An'ala Ambalaomby · Ambatoharanana · Ampandoantraka · Ampasimaneva · Anosibe An'ala · Antandrokomby · Longozabe · Niarovana Marosampanana · Tratramarina
Moramanga Ambatovola · Amboasary · Ambohidronono · Ampasipotsy Gare · Ampasipotsy Mandialaza · Andaingo · Andasibe · Anosibe Ifody · Antanandava · Antaniditra · Beforona · Belavabary · Beparasy · Fierenana · Lakato · Mandialaza · Moramanga · Moramanga Suburbaine · Morarano Gare · Sabotsy Anjiro · Vodiriana
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Faritra_Alaotra-Mangoro&oldid=1044885"
Voaova farany tamin'ny 13 Mey 2022 amin'ny 05:37 ity pejy ity.